जहाज दुर्घटनाको उद्धारमा लापरबाही | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← यसरी टुटेको थियो जहाजको सम्पर्क, विमान दुर्घटनास्थल कस्तो थियो ?	आकासमा उडिरहने सोफिया सपना →	जहाज दुर्घटनाको उद्धारमा लापरबाही	24
काठमाडौं । मकवानपुरको बस्तिपुर नजिकै रहेको मोतिपुरमा बकैया प्राविको नजिकै भएको अग्नि एयरको जहाज दुर्घटनापछि उद्धार कार्यमा सम्बन्धीत एयरलाईन्स, नेपाल प्रहरीले गम्भीर लापरबाही गरेको पाईएको छ ।
विहान ७:३० बजे भएको दुर्घटनाको खबर ७:३५ मा प्रायः सबै प्रमुख सञ्चार माध्यममा ब्रेकिङ न्यूजको रुपमा आईसकेको थियो । तर घटनास्थलमा ११:१५ बजेमात्रै प्रहरीको टोली पहिलो पटक पुगेको थियो । साथै फिस्टेल एयरको उद्धार टोली ११:२५ मात्रै घटनास्थलमा अवतरण गरेको थियो । घटनास्थल निकै सुगम तथा फराकिलो बारीका पाटाहरु भएको स्थान हुँदा पनि उद्धार कार्यमा भएको ढिलाईले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । उद्धार कार्यमा खटिनु पर्ने प्रहरीले पनि समयमा नै चासो नदेखाएको देखिएको छ । शिखरपुर गाविस क्षेत्रमा हेर्ने प्रहरी छतिवन गाविस-२ मा रहेको हात्तिसुडे प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीलाई मोतिपुर पुग्न झण्डै चार घण्टा लाग्नुले हात्तिसुडे प्रहरी कार्यालयमा खटिएका प्रहरीको गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ । ठूलो खोला तर्नु नपर्ने, जम्माजम्मी एक घण्टाको दुरीमा रहेको मोतिपुर पुग्न हात्तिसुडेको प्रहरीलाई किन चार घण्टा लाग्यो । दुर्घटनास्थल मोतिपुर, छिमेकी गाउँ गोठडाँडाबाट हात्तिसुडेमा रहेको बुद्धमावीमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरु ४५ मिनेटमै आउने गरेका स्थानीय बासिन्दाले जानकारी दिएका छन् । तर प्रहरीलाई आईपुग्न चार घण्टा लागेको देखेर छक्क परेको जनसमाज सहयोगी प्रशान्त बिकले जनाएका छन् । फापरबारीको प्रहरीलाई घटनास्थलसम्म आउन खोला तर्नु पर्ने भएपनि हात्तिसुडेको प्रहरीलाई शिखरपुरकै नौ नम्बरको दमा, खजुरीदमार, तथा गोठडाँडा हुँदै जादा सामान्य खोला मात्रै तर्नु पर्दछ, बकैया खाला तर्नु पर्दैन । त्यस्तै काठमाडौंबाट उद्धार कार्यमा खटिन पनि व्यापक लापरबाही गरिएको पाईएको छ । प्रायः जस्तोसुकै मौषम खराब हुँदा पनि चोभार हुँदै बाग्मती किनारै किनार गएर र्राईगाउँबाट आउँदा कुनै पनि पहाड नै नपर्ने बस्तिपुरमा पुग्नको लागि चार घण्टासम्मको प्रतिक्षा गर्नुको कारणबारे कसैले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । खासै कुहिरो तथा बादल नलाग्ने समुन्द्र सतहबाट ८/९ सय मिटर उचाईमा रहेको उक्त स्थानमा काठमाडौंबाट उद्धार टोली पुग्न नसक्नुलाई गम्भीर रुपमा लिनु जरुरी छ ।
कसरी भयो दुर्घटना –
विमान दुर्घटना भएपछि हचुवाको भरमा धेरैखाले समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर घटनाका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जहाजमा आगो लागेको वा खसिसकेपछि आगो लाग्ने जस्ता कुनै कार्यहरु भएका थिएनन् । जनसमाजका सहयोगी प्रशान्त बिक भन्द्छन, विद्यालय नजिकै रहेको भर्खरै नयाँ खनिएको सडकमा जहाज हावाको बेगसरी आएर बजारियो । र्सवसधारणहरु एक पटक सबै घर भित्र छिरे । जहाज जमिनमा बजारिँदा ठूलो आवाज आएकोले सबै त्रस्त थिए । प्रायः अशिक्षित र तामाङ तथा दलित बस्ति रहेको मोतिपुरबासीहरु बाहिर निस्केर हर्दा भिमकाय विमान सडकमा भासिएको देखेर अत्तालिएका थिए । जहाजभित्रबाट कुनै चित्कार तथा आवाज आएको सुनिएको थिएन । दुर्घटनापछि कसैले पनि जहाज नजिक जाने हिम्मत गरेका थिएनन् ।
नेपाल टेलिकमको रिमकार्ड भएका केही मानिसहरु हेटौडामा रहेका आफ्ना साथीहरुलाई खबर भन्ने क्रममा स्थानीय सञ्चारकर्मीको कानमा पाँच मिनेटमै खबर फैलिएको थियो । जहाज जमिनमा भासिएको थियो । भासिएसँगै विमानका टुक्राहरु र मानिसका शवका टुक्राहरु झण्डै डेढसय मिटरपरसम्म उछिट्टएको थियो । प्रशान्त विक उल्लेख गर्छन, स्थानीय महिला तथा बालबालिकाहरु त्रस्त भएका थिए । कहालीलाग्दो दुर्घटनाको चारघण्टासम्म स्थानीयबासिन्दाले नै उक्त स्थानको सुरक्षा प्रदान गरेका थिए । Like this:Like Loading...
Posted by agnibana on अगस्ट 24, 2010 in Uncategorized
← यसरी टुटेको थियो जहाजको सम्पर्क, विमान दुर्घटनास्थल कस्तो थियो ?	आकासमा उडिरहने सोफिया सपना →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...